မြဝတီဇော်: November 2012
နာရီကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ညရှစ်နာရီခွဲနေပြီ။ ခုချိန်ထိ သူ့အရိပ်အယောင်ကို မမြင်ရသေး။ ဗိုက်က လည်း ဆာလှပြီ။ နေ့ခင်းကတည်းက သေသေချာချာ မှာထားလျက်နဲ့ သူက နောက်ကျနေတာမို့ စိတ်က တိုချင်သည်။ ဒီနေ့ ကျွန်မမွေးနေ့မို့ ညစာ အတူတူစားဖို့ သူ့ကို ညရှစ်နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ဖို့ မှာလိုက်လျက်နဲ့ ခုတော့... ရှစ်နာရီခွဲတာတောင် သူက ပျောက်ချက်သား ကောင်းတုန်းလေ။ သိမယ် ... ဟင်း ... လာပေ့စေဦး ... တစ်ပတ်လောက်ကို စိတ်ကောက်ပစ်လိုက်ဦးမယ်။
ပြောရဦးမယ်။ ညစာဆိုလို့ အထူးတလည် ပြင်ဆင်ထားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခါတိုင်း ချက်နေကျ ထမင်းနဲ့ ဟင်းပါပဲ။ အဲ .. (ကျွန်မတို့အတွက်) ထူးတယ်လို့ ပြောရမယ့် အချက်က နှစ်ယောက်အတူ ထမင်း လက်ဆုံ စားဖို့ပါပဲ။ တကယ်ပါ... ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ထမင်းလက်ဆုံ စားဖြစ်တဲ့နေ့ ဆိုတာ အင်မတန် ရှားပါတယ်။ သူကလည်း မိုးလင်းတာနဲ့ အိမ်ပေါ်မှာ မရှိတဲ့သူ။ ကျွန်မကလည်း အချိန် တန်ရင် ရုံးသွား၊ ညနေ မိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ဆိုတော့ ... နေ့လည်စာကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အတူစားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ညစာကျပြန်တော့လည်း သူက ညနေခြောက်နာရီမကျော်ခင် ထမင်းစားတတ်သူဆိုတော့ ကျွန်မ ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဆို သူက စားပြီးလို့ ထမင်းလုံးတောင် စီနေပြီလေ။ ကဲ... ဒါဆိုလည်း ပိတ်ရက်မှာ အတူစားလို့ ရတာပဲလို့ ပြောမလို့လား။ အမယ်လေး ... ဝေးပါသေးရဲ့ရှင်။ ရုံးပိတ်ရက်ဆို သူ့အလုပ်က ပိုများ တတ်သေးတယ်။ သြော်... သူ့အလုပ်ဆိုလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သူ့မှာ ဆိုင်ကယ်လေး တစ်စီးရှိတော့ အလကားနေ အလကားပဲဆိုပြီး သူက ကယ်ရီဆွဲတယ်လေ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုတော့လည်း တခြား လူတွေလို အငှားယူမောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ စကားပြောစရာ မလိုတော့ တစ်မျိုး စိတ်အေးရပါတယ်။ နောက်ပြီး သူက သူ့ဆိုင်ကယ်ကို တသသ လုပ်နေတတ်တဲ့လူဆိုတော့ တော်ရုံ အလေးအပင်တွေကိုလည်း မတင်ဘူး ရှင့်။ သူ့ဖောက်သည် အများစုက အနီးအပါးက လူတွေပါ။ ဈေးသွားဈေးပြန် စီးကြတာလောက်ပါပဲ။ သူက လည်း သူ့ဆိုင်ကယ် နာမှာစိုးလို့၊ ပွန်းရာ ခြစ်ရာ ထင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ကြုံရာလူ ငှားစီးရင်တောင် တယ်မလိုက် ချင်ဘူး။
အဲ... ထမင်းအတူ မစားဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောရာကနေ သူ့အလုပ်အကြောင်းတွေ ရောက်ကုန်ပြီ။ ထားပါ ရှင်...တိုတို ပြောရရင် သူက ဒီနေ့လို ရုံးပိတ်ရက်မျိုးဆို ပိုပြီး အလုပ်များတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကလည်း ဒီလို အခြေအနေတွေရှိလို့ကို ညစာလေးပဲ အတူစားကြရအောင်လို့ သေသေချာချာ မှာလိုက်ပါ လျက်နဲ့ ကြည့်လေ ... ခုပဲ ပြောရင်းဆိုရင်းကို ညကိုးနာရီ ထိုးတော့မယ်။ တစ်ခါတလေလေး ထမင်းလက်ဆုံ စားဖို့ကို ဒီလောက် ခက်ခဲနေရတယ်လို့ ပြောမပြောချင်ပေါင်။ တွေးလေ တွေးလေ စိတ်က ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ အဟုတ်။ ခါတိုင်းနေ့တွေဆိုရင် ဒီအချိန်လောက်ဆို သူ အိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ ကျွန်မမှာလည်း သူနဲ့အတူ ထမင်းစားဖို့ ညနေကတည်းက ရေမိုးချိုး သနပ်ခါးအဖွေးသားလိမ်းပြီး လည်တဆန့်ဆန့် မျှော်နေရတာ။ ခုတော့ သူလုပ်ပုံက ကျွန်မကို လုံးဝ အလေးအနက် မထားသလိုပဲ။ စောင့်ရတာ ကြာလွန်းလို့ ဗိုက်ဆာ တာတွေလည်း မေ့ကုန်ပြီ။ ဒီ့ထက်လည်း ထပ်မစောင့်နိုင်တာနဲ့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပြီး အုပ်ဆောင်းနဲ့ အုပ်ထားတဲ့ ထမင်းဝိုင်းကို ကျောခိုင်းပြီး ကျွန်မ အိပ်ရာထဲ ဝင်ခွေနေလိုက်တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေပေ မယ့် သူ့ဆိုင်ကယ်သံကိုတော့ နားစွင့်နေမိတယ်။ ဒါမှ သူ အိမ်တံခါးဝရောက်တာနဲ့ သူ့ကို ရန်လုပ်လို့ ရမှာလေ။
ဟော ... ဆိုင်ကယ်သံ ကြားရတယ်။ သူပြန်လာပြီ ထင်တယ်။ သေချာပါတယ် သူမှ သူအစစ်။ သူက ဆိုင် ကယ်ကို စက်မသတ်ခင် အမြဲတမ်း ဘရူးဘရူးနဲ့ လီဗာကို ကစားတတ်တယ်လေ။ အဲဒါလည်း ဘာကြောင့်မှန်း ခုထိ ကျွန်မတော့ မသိပါဘူး။ တစ်ခါတလေတော့လည်း သူ့ရဲ့ အဲဒီအကျင့်လေးက တစ်မျိုးကောင်းသားရှင့်။ ဘယ်သူ့ ဆိုင်ကယ်သံပဲ ကြားရ ကြားရ၊ ဒီအသံမျိုး မကြားရသရွေ့ သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မက သိပြီး သား။ ခဏကြာတော့ လှေကားက တက်လာတဲ့ သူ့ခြေသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဟော... တံခါးဝမှာ ရပ် သွားပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နှစ်ချက်ဆက်တိုက် ခေါက်လိုက်တဲ့ တံခါးခေါက်သံကို ကြားရတယ်။
"ဟင်း .... ကိုယ်တော်၊ ကြွတော်မူလာပြီပေါ့လေ၊ ဟုတ်လား။ ဘယ်အချိန် ရှိနေပြီလဲ။ ရှင့်ကို ကျွန်မ နေ့လယ် တုန်းက ဘာမှာလိုက်သလဲ။ ဒီအချိန်မှ ပြန်လာတော့ ကျွန်မက ခုမှ ထမင်းစားရမှာလား"
အဲသလို ပြောပစ်လိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး ကျွန်မ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ပထမဆုံး သူ့ကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်မ စိတ်ဆိုးဖို့ထက် အံ့အားသင့်သွားမိတယ်။ ဟင်...ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ကိုယ်လုံး စိုရွှဲနေတာတုန်း။ မိုး လည်း ဒီလောက် မရွာပါဘူး။ သူက သူ့အပြစ်ကို မသိသလိုဘဲ ကျွန်မကို အသာတွန်းဖယ်ပြီး အိမ်ထဲ ဝင်လာ တယ်။ ပြီးတော့ အုပ်ဆောင်းအုပ်ထားတဲ့ ထမင်းဝိုင်းကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး -
ကျွန်မ ပြန်မဖြေတော့ သူဘာမှ ဆက်မပြောဘဲ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ရေတဝုန်းဝုန်း ချိုးနေ သံ ကြားရတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက သူ့မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ရေချိုးခန်းအဝက အဝတ်လှန်းတဲ့ တန်းပေါ် တင်ပေး ထားလိုက်တယ်။ ခုချိန်ထိ သူ့ကို ဘယ်လို ရန်စကား စပြောရမလဲလို့ ကျွန်မ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ ခဏ ကြာတော့ သူ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး ကျွန်မ အဆင်သင့် တင်ပေးထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပဝါကို ကြိုး တန်းပေါ်က လှမ်းယူပြီး ကျွန်မကို တစ်ချက်ကြည့်တယ်။ ဘယ်ရမလဲ၊ ကျွန်မလည်း သူ့ကို မျက်စောင်း တစ်ချက် အမိအရ ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ ဟင်း ... ဒါ အစပဲ ရှိသေးတယ်။
အမယ်....သူက ကျွန်မမျက်စောင်းထိုးတာကို ဘာမှ မသိလိုက်သလို လှည့်ထွက်သွားရင်းနဲ့ "ထမင်းဆာပြီ ကွာ...စားကြစို့"တဲ့လေ။ ကြည့်စမ်း....ပြောပုံကိုက သူပဲ အမှားမလုပ်ထားတဲ့အတိုင်း။ စိတ်တိုလိုက်တာနော်။ ဟင်း။ ဒီတစ်ခါတော့ မရတော့ဘူး။ ကျွန်မ စိတ်တိုတိုနဲ့ သူ့နောက်က ခြေဆောင့်လိုက်သွားရင်း သူ့ကို ရန်တွေ့မိတယ်။
"သြော်... ဆာသေးတယ်ပေါ့၊ ဟုတ်လား။ ဒီအချိန်ကြီးကျမှ ညစာစားလို့ ဘာထူးတော့မှာလဲ။ ဒီအတိုင်းပဲ အဆာခံပြီး အိပ်လိုက်ပါတော့လား။ ဒီလောက် သေသေချာချာ မှာလိုက်လျက်နဲ့ ရှင်က ကျုပ်ကို ရွဲ့တာလား။ သိပါပြီ ... နောက်ဆို ရှင်နဲ့ ထမင်းလက်ဆုံစားဖို့ ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ဘူး သိရဲ့လား"
ကျွန်မ စိတ်ထဲရှိတာ တရစပ် ပြောချပစ်လိုက်တယ်။ အရေးထဲမှာ ဝမ်းနည်းစိတ်ကြောင့် အသံက တိမ်ဝင် သွားသေးတယ်။ သူက ကျွန်မကို လှည့်ကြည့်ရင်း -
"ခဏနေ စကားပြောစရာရှိတယ်။ ပြီးရင် ထမင်းစားမယ်နော်။ ဟင်းနွှေးထားလိုက်ဦး"
"အို...မစားပါဘူး။ ဒီအချိန်ကျမှ ဘာထမင်းမှလည်း မစားချင်တော့ဘူး။ ရှင့်ဘာသာရှင်ပဲ ဝင်အောင် စားပါ"
ကျွန်မ ဒီလိုပြောလိုက်တော့ သူ ကျွန်မဘက် လှည့်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ လက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့အင်္ကျီ အိတ်ကပ်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မ လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ လက်ထဲမှာ လေးထောင့်ဘူး ရှည် ရှည်လေးတစ်ခု ပါလာတယ်။
"သိချင်ရင် အရင်ဆုံး ထမင်းအတူစားရမယ်။ ဟုတ်ပြီလား"
"အခု ဖွင့်ကြည့်တော့ ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ"
"ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းစားတာ ဒီ့ထက် နောက်ကျသွားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူး"
"နေပါဦး။ အခုမှ ထမင်းကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် စားချင်နေရတာလဲ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ စောစော ပြန်မလာရ တာလဲ၊ ပြောပါဦး"
"ကဲ၊ ဒီလိုကွာ ဒီလို၊ ဒီနေ့ မင်းမွေးနေ့မို့ မင်းက နေ့လယ်တုန်းက ညစာအတူစားဖို့ ပြောလိုက်တော့ ငါ စဉ်းစား မိတယ်။ ငါက ခုချိန်ထိ မင်းကို မွေးနေ့လက်ဆောင် တစ်ခုမှ ဝယ်မပေးမိသေးပါလားလို့။ အရင်တုန်းက လည်း ဒီလိုပဲ မသိလိုက် မသိဖာသာနဲ့ ကျော်လာခဲ့တာဆိုတော့ ဒီနှစ်မှာတော့ မင်းကို တစ်ခုခု ဝယ်ပေးချင်မိ တယ်။ ဒါနဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ငါရှာလို့ရတဲ့ ငွေနဲ့ မင်းအတွက် နာရီလေးတစ်လုံး ဝယ်ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မင်းအခုပတ်နေတဲ့ နာရီကလည်း ဟောင်းနေပြီလေ။ ညဦး ပိုင်းရောက်လို့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ကြည့်လိုက်တော့ ငွေက နာရီတစ်လုံး ဝယ်ဖို့လောက် မများသေးဘူး။ ငါကလည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ပြန်မပြင်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ လိုတဲ့ငွေကို ဒီည မရမချင်း အိမ်မပြန်ဘူး ဆိုပြီး နေတဲ့အချိန် မိုးက ရွာလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူနဲ့ ကျောက်တန်းကို အဖော်လိုက်ခဲ့ပေးပါ၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး မှာထားတာ သွားယူမလို့ဆိုပြီး ပြောတာနဲ့ မိုးရွာထဲပဲ သူနဲ့ လိုက် သွားတာ။ အလကားတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ ငါ့အတွက်လည်း ဝင်ငွေရတာပဲ။ အဲဒီက အပြန်ကျမှ မင်း အတွက် နာရီကလေး ဝင်ဝယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကွာ၊ ထုံးစံအတိုင်း ငါက စိတ်တိုင်းမကျမချင်း တစ်ဆိုင်ဝင်၊ တစ်ဆိုင်ထွက် ရွေးဝယ်နေတာနဲ့ ..... "
သူ့စကား မဆုံးသေးခင်မှာပဲ ကျွန်မ ဝမ်းပန်းတနည်း ငိုချလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မ မှားသွားပြီ။ သူ့ရဲ့ စေတနာကို မသိဘဲ ကျွန်မက အထင်တွေလွဲပြီး ရန်စကား ပြောနေမိတာ။ သူက ခုလိုမျိုး ကျွန်မအတွက် စဉ်းစားပေးပြီး မိုးရေထဲ ဒုက္ခခံနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက သူ့အပေါ် ငြူစူ ရန်လိုနေမိတယ်။ ကျွန်မ အရမ်းမှားသွားပြီ။ ခေါင်းငုံ့ ငိုရှိုက်နေတဲ့ ကျွန်မကို သူက -
"ဟာ၊ မွေးနေ့မှာ ငိုနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ၊ မငိုရဘူးလေ။ ငါမှားသွားပါတယ်ကွာ။ မင်းစိတ်ပူနေမှာကို ငါ မတွေး မိဘဲ ငါ့စိတ်ကူးနဲ့ငါ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေမိတာ၊ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွာ၊ မငိုနဲ့တော့နော်"
အဲဒီနောက်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အတူတူ ထမင်းလက်ဆုံ စားဖြစ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူနဲ့ကျွန်မ သူ ဝယ်လာတဲ့ နာရီဘူးလေးကို အတူတူ ဖွင့်ကြည့်ကြတယ်။ နာရီလေးက သိပ်အကောင်းစားကြီးတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒိုင်ခွက်က ထောင့်ချိုးရှစ်ခုနဲ့ ရွှေရောင်နာရီလေးပါ။ နာရီကြိုးကလည်း မိန်းကလေး သိပ်မဆန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အရမ်း နှစ်သက်တယ်။ နောက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဒီနာရီလေးက ကျွန်မကြိုက်တဲ့ ပုံစံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအတွက် ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးပါ။ အဲဒီနေ့က စပြီး ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ့အပေါ် ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ အနိုင်မယူတော့ဘူးလို့။ အရာရာကို သူ့သဘောအတိုင်း၊ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲ အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်ဖို့ ကျွန်မ ကြိုးစားပါတော့မယ်လို့လေ ...။ (ကဗျာဆန်ဆန် ပြောရရင်တော့ ကျွန်မက သူ့ရဲ့အချစ်မှာ နူးညံ့စွာ ကျရှုံးသွားရတယ်ပေါ့ရှင်။ )
[ဒါနဲ့... စကားမစပ် ကြွားတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ရှင်။ အခုလက်ရှိ ကျွန်မမှာ နောက်ထပ် နာရီအသစ် တစ်လုံး ရှိနေတာတောင် ဒီနာရီလေးလောက် မက်မောတာ၊ နှစ်သက်တာ၊ တန်ဖိုးထားတာ မရှိဘူး လို့ ပြောရင် ယုံကြပါ့မလားရှင်။ ]
Posted by မြဝတီဇော် at 2:31 AM
(ခုထိ) ခပ်နက်နက် စူးဝင်ဆဲပဲ။
မင်းရှေ့မှာ ငါကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်ထက်
ဒါပေမဲ့ မင်းဘယ်တော့မှ မသိနိုင်တဲ့
ကိုယ်က အရင်ပေးမှ ရတယ်ဆိုတဲ့
ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေ မကျက်သေးသရွေ့
မင်းရှေ့မှာ ငါ ဆက်ပြီး
Posted by မြဝတီဇော် at 12:05 AM
တကယ်တော့ ဒီစာစုကလေးကို ကျွန်မ အရင်ဆုံး ရေးဖြစ်ခဲ့သင့်ပါတယ်။ ရေးဖို့ စိတ်ကူးမိတာလည်း အကြိမ် ကြိမ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ချရေးမယ်ဆိုပြန်တော့ ဘာက စရေးလို့ ရေးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဝန်ခံချင်တာကတော့ ကျွန်မ ဒီဘလော့လေးကို စခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက အခုထိ ဘလော့နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ ပြောရရင် ဒီဘလော့လေးကို ကျွန်မ စာရေးချင်စိတ် တစ်ခုတည်း နဲ့ စမ်းတဝါးဝါး လုပ်ထားရတာပါ။ ကျွန်မ ဘလော့တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာခဲ့တာတော့ အတော်ကြာပါပြီ။ အခု လက်ရှိ အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ဂါအတော်များများရဲ့ စာတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးနေတာ ကြာပါပြီ။ အရင်တုန်း ကတော့ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့တွေမှာ စာတွေ အမြဲလိုလို ဝင်ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ စာတွေသာ ဝင်ဖတ်တတ်တာ ကွန်မန့်ရေးဖို့ကျတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ မရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တိတ် တဆိတ် အားပေးဖတ်ရှုရင်း နှစ်သက် အားကျခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ ကျွန်မ မကြာခဏ စာတွေ ဝင်ဖတ်နေကျဖြစ်တဲ့ ဘလော့တစ်ခုမှာ ကျွန်မငယ်စဉ်က တက်ခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါ တယ်။ သူ့စာတွေ ဖတ်လိုက်မိပြီးတော့မှ စာရေးသူဟာ ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်မ ခန့်မှန်းလိုက်မိပါတယ်။ သူက ကျွန်မနဲ့ တစ်ကျောင်းတည်းထွက် ဖြစ်သလို၊ ငယ်စဉ်ကလည်း ခင်မင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အထက်တန်း စတက်တဲ့နောက်ပိုင်း မဆုံဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီလို ဘလော့လေးတစ်ခု လုပ်ပြီး စာတွေရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာ ဝန်ခံထားသလို ကျွန်မက ဘလော့နဲ့ပတ်သက်လို့ လုံးဝ အစိမ်းသက်သက်ပါ။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ဆီကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းဖြစ်ပါ တယ်။ သူကလည်း လိုလိုလားလားပဲ ကူညီပါတယ်။ ကျွန်မကို ဘလော့တစ်ခု ဘယ်လို တည်ဆောက်ရတယ် ဆိုတာက စပြီး ကျွန်မ အစမ်းလုပ်ထားတဲ့ နမူနာဘလော့လေးကိုလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး အကြံ ဉာဏ်ပေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီနေ့ ဒီဘလော့လေး ဖြစ်လာရတာပါ။ အဲဒီအတွက်လည်း သူငယ်ချင်း မြစ်ကျိုးအင်း ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်မ စာဖတ်သူများကို တောင်းပန်ချင်တာတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်မက စာရေးကျဲပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ် ရေးမယ်ဆိုတိုင်းလည်း ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံး စာကို ပုံကြမ်းဖော် ကြည့်တတ်ပါတယ်။ ဒါတောင် တကယ် ချရေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ စိတ်မတိုင်းမကျခဲ့တဲ့ စာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါကို စာဖတ်သူများလည်း တွေ့မှာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်မမှာ အခုထိ ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေ ဆဲပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့စာတွေမှာ ချို့ယွင်းမှု၊ ချွတ်ချော်မှုလေးတွေ တွေ့တဲ့အခါ နားလည်မှုနဲ့ ဖတ်ရှု အကြံဉာဏ်ပေးကြဖို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဘလော့လေးကို အမြဲ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး အကြံဉာဏ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ကိုလွင်ပြင်လှိုင်းငယ်၊ မဂျက် (စံပယ်ချို)၊ ညလေး မိုးနတ်ကြယ်စင်၊ မချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) တို့ကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။း)
နောက်ပြီး ကျွန်မလိုပဲ စာတွေ ဝင်ဖတ်လေ့ရှိပေမယ့် ကွန်မန့်ခြေရာ မချန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြား စာဖတ်သူများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။ ကျွန်မရဲ့စာတွေမှာ ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှုလေးတွေ တွေ့မိခဲ့ရင် အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန် ပြုပြင်ပေးကြပါရှင်။ ကျွန်မလည်း စာဖတ်သူများအတွက် အခုထက် ပိုကြိုးစားသွား ပါ့မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူများ အားလုံးကို ခင်မင် လေးစားလျက်
Posted by မြဝတီဇော် at 2:06 AM
သင့်အနေနှင့် စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုပြီးသည့်နောက် စာရေးသူ ပေးချင်သော ဆိုလိုရင်းကို ဖမ်းဆုပ်မိသည့် အခါ "ဤစာကို ဖတ်ရကျိုးနပ်ပေသည်"ဟူသည့် ကျေနပ်ပီတိမျိုး ခံစားဖူးပါသလား။ စာရေးသူ၏ အာဘော် ဆိုသော်လည်း ဖတ်မိသော စာသည် မိမိ၏ ခံစားချက်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် သဘောထားအမြင်တို့ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိသည့်အခါ ဖတ်ရသော စာအပေါ် နှစ်လိုအားရသည့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါသလား။ ထိုမျှမက သင်သည် မိမိ ဖတ်ရှုပြီးသည့် စာတစ်ပုဒ်ကို အခြားသူများလည်း မိမိကဲ့သို့ပင် အသိအမြင်၊ အတွေးအခေါ်၊ ခံစားမှုမျိုး ရရှိစေလိုသည့် စိတ်စေတနာဖြင့် မျှဝေပေးတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် သင်သည် စာဖတ်သူကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ပေသည်။
စာပေဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် စာပေမှရသော အသိပညာ ဗဟုသုတများသည် နေ့စဉ်ဘဝတွင် တိုက်ရိုက် တည့်မတ် စွာ လမ်းညွှန်နိုင်သည်များ ရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံလည်း လူ့စရိုက်၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အမူအကျင့်တို့ကို တစေ့ တစောင်း လေ့လာ သိရှိနိုင်ပါသည်။ စာဖတ်သူများအနေနှင့် စာပေဖတ်ရှုရာတွင် သုတ၊ ရသ စသည်ဖြင့် ကိုယ်စိတ်သန်ရာကို ရွေးချယ် ဖတ်ရှုလေ့ရှိကြပါသည်။ သုတစာပေသမားမို့ အတွေးအခေါ် ပိုမို ထူးချွန် ထက်မြက် သွက်လက်သည်ဟူ၍ မဆိုနိုင်သလို ရသစာပေသမားမို့ အသိအမြင်၊ အယူအဆ နုနွဲ့ကြသူများ၊ စိတ်နုကြသူများဟုလည်း မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ မည်သည့်စာပေအမျိုးအစားကို ဖတ်သည်ဖြစ်စေ စာဖတ်သူ အနေဖြင့် စာပေက ပေးသော (တစ်နည်း) စာရေးသူက ပေးချင်သော ဆိုလိုရင်းကို ခြုံငုံပြီး နားလည် သဘောပေါက်ရန်သာ အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သဘောပေါက် နားလည်မှသာ စာရေးသူနှင့် စာဖတ်သူ အကြား အသိအမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်သည့်အပြင် စာတစ်ပုဒ်အပေါ် အပြုသဘောဖြင့် အပြန်အလှန် သုံး သပ် ဆွေးနွေးနိုင်ပေမည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အွန်လိုင်းမီဒီယာ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာသည့်အလျောက် စာရေးသူများလည်း အလျှို အလျှို ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူအချို့မှာ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွင်သာမက ပုံနှိပ်မီဒီယာလောက တွင်ပါ အောင်မြင်မှု ရနေကြသည်။ အချို့စာရေးသူများမှာမူ အွန်လိုင်းမီဒီယာလောကတွင် နာမည် ထင် ရှားသော်လည်း ပုံနှိပ်ဘက်တွင် အတွေ့ရနည်းသေး၏။ အချို့ကမူ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွင်ရော၊ ပုံနှိပ်မီဒီ ယာတွင်ပါ နေရာတစ်နေရာရဖို့ ကြိုးစားနေကြသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုထိုသော စာရေးသူများတွင် ကွဲပြား ခြား နားသော အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ ခံစားချက်တို့ ရှိကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာရေးသူတိုင်း ၏ တူညီသော စိတ်ဆန္ဒမှာ မိမိတို့ ရေးသည့်စာသည် စာဖတ်သူအတွက် တစ်စုံတစ်ရာသော အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ခံစားမှု၊ အတွေးအမြင်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်စေသော၊ အကျိုးပြုစေသော စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရန် ဟူ သည့် စေတနာပင် ဖြစ်သည်။
စာကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရန် စာရေးသူတစ်ဦးသည် မိမိရေးသည့်စာ၏ အတိမ်အနက်၊ ဆိုလိုရင်းကို ရှင်း လင်း ပြေပြစ်စွာ ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ အားသန်သည့် အကြောင်းအရာကို ရိုးရှင်း ကျစ် လျစ်စွာ ဖွဲ့ဆိုနိုင်စွမ်းလည်း ရှိရပါမည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့ဆိုနိုင်ဖို့ရာ မိမိကိုယ်တိုင်က စာဖတ်နာသူ ဖြစ်ရပါမည်။ စာ များများဖတ်မှ မြန်မာစကား အသုံးအနှုန်း၊ ဝါကျတို့ကို သူ့နေရာနှင့်သူ အထားအသိုမှန်အောင်၊ အဖြတ် အတောက်မှန်အောင် ရေးဖွဲ့ ထားသိုတတ်လာမည်ဖြစ်သည်။ စာရေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သတ်ပုံ မှန်အောင် ရေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သတ်ပုံမှန်မှ မိမိရေးသည့်စာ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဆိုလိုရင်း အနက်ကို တိကျစွာ ဖော်ညွှန်းနိုင်ပေမည်။ ထို့အတူ စာကို အဖြတ်အတောက်ကို မှန်စွာ ရေးတတ်ရန်လည်း လိုပါသည်။ စာဖတ်သူအနေနှင့် တစ်ဆက်တည်း ရှည်လျားစွာ ရေးသားထားသော စာပိုဒ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံး သည်အထိ ဖတ်ရန် ငြီးငွေ့သွားနိုင်သည်။ စာတစ်ကြောင်းတွင် အဖြတ်၊ အရပ် မှန်ကန်မှုနှင့် သတ်ပုံ မှန်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ငယ်စဉ်က သင်ကြားခဲ့ရသည့် ပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုအား သာဓကအဖြစ် ဖော်ပြလိုပါသည်။
လူတစ်ဦးသည် သစ်ပင်ခုတ်လှဲရန်အတွက် ဓားကောင်းကောင်းတစ်လက်ကို ငှားရမ်းလိုသဖြင့် ရှာဖွေလျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ရှာဖွေရာတွင် အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့၌ ဤသို့ ရေးထားသောစာကို တွေ့ရှိ၍ အကျိုးအကြောင်း ဝင်ရောက်စုံစမ်းသည်။
ဓားငှားလိုသူသည် ရေးထားသော စာ၏ သတ်ပုံအမှားနှင့် အဖြတ်အတောက် မှားယွင်းမှုကြောင့် သူ၏စိတ် တွင် ဤအိမ်ရှိ မသာရ အမည်ရှိသူက ဓားငှားရမ်းသည်ဟု ထင်မှတ်မှားခဲ့သည်။ ရေးထားသည့် စာကြောင်း ၏ ဆိုလိုရင်းအမှန်မှာ-
ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ "ဂါထာပေး တေးဖြစ်" ဆိုသည့် စကားအတိုင်း စာဖတ်ရာတွင် အဖြတ်အတောက် မှန်မှန် မဖတ်တတ်ပါက ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားသွားတတ်သည်။ ဥပမာအနေနှင့် မူရင်းဆေးစာတစ်ခု တွင် ဆေးနည်းဖော်စပ်ရာ၌ ပါဝင်သည့် ဆေးအမည်များဖြစ်သည့် "ထန်းမြစ်၊ ကတိုး၊ ရှိန်းခို၊ တောင်ကြာဥ၊ ကျူ၊ ဆင်ချေးမှို"စသည်တို့ကို အဖြတ်အတောက် မှန်မှန်၊ သတ်ပုံ မှန်မှန် မရေးမိသဖြင့် ဖတ်သူက တေး တစ်ပုဒ်ဟု ထင်မှတ်ကာ -
"ငွေလှိုင်းက ထန်၊ မြစ်ယံက တိုး၊ ရှိန်းခိုတောင်ကြာဦး၊ ကျူးဆင်ချီမိုး"
ဟူ၍ မှားယွင်းစွာ ဖြည့်စွက် စပ်ဆိုမိပုံမှာလည်း သတိပြုဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် စာရေးသူတို့သည် စာပေဝမ်းစာ ပြည့်ဝကြသည့်သူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် မိမိ တို့ ရေးသားသည့် စာပေ၏ သဘောအဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုရင်းအနက်တို့ကို ပီပြင်စွာ ရေးသားဖွဲ့နွဲ့နိုင်ကြပါသည်။ စာဖတ်သူဆိုသည်မှာလည်း စာရေးသူ၏ စာပေအရေးအသား၊ အတွေးအခေါ်၊ စိတ်စေတနာတို့ကို စာပေမှ တစ်ဆင့် အတုယူ ဆည်းပူး လေ့လာကြရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ ပေး ချင်သည့် သုတ၊ ရသ စာပေတို့ကို စာဖတ်သူ၏ ရင်တွင်းသို့ ချောချောမွေ့မွေ့ ရောက်ရှိနိုင်သော (သို့) ဖတ်ရှုရန် လွယ်ကူ ရှင်းလင်း ပြေပြစ်သော အရေးအသားမျိုးကို ဂရုထား၍ ရေးနိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် ရေးသူနှင့် ဖတ်သူကြား အမြင်ကွာဟမှု လျော့နည်းကာ စာပေလောကကို ပိုမို အလှဆင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါ သည်။
Posted by မြဝတီဇော် at 11:38 PM
"တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အချစ်မရှိဘဲ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သလို ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရှိဘဲလည်း မချစ်နိုင်ဘူး"
"မင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်တော့မလို့လား ? မင်းရဲ့ အထီးကျန်မှုကို အဖော်ပြုဖို့အတွက်နဲ့တော့ သူ့အချစ်ကို အသုံးမချလိုက်ပါနဲ့။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မင်း ပိုပြီး အထီးကျန်ဆန်ရလိမ့်မယ်"
"တကယ့် အချစ်စစ်ဆိုတာ မျက်ကန်းမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို မြင်နိုင်သလို ဆိုးကွက်တွေကိုလည်း မြင်နိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှ ဆက်ချစ်နေနိုင်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။"
"Hi ! ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားလေးက တိုတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနှစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားစေဖို့ လမ်းစလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်"
"စကားတစ်ခွန်း ကြားဖူးတယ်။ အချစ်က ဘဝတဲ့။ မင်း အချစ်ကို မေ့နေတာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ မင်းဘဝ ကိုလည်း မေ့နေသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်"
"ငါနဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာကို ပြသဖို့ မင်း ပေါက်ကွဲတယ်၊ မင်း အယူအဆကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း မင်းသိစေဖို့ ငါ ငိုကြွေးတယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်က ငါတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေ နာကျင်ခဲ့ရတယ်"
"အချစ်က ပြီးပြည့်စုံနေဖို့ မလိုဘူး။ စစ်မှန်ဖို့ပဲ လိုတယ်"
"ငါ့ရှေ့က ကီးဘုတ်လေးကို ကြည့်လိုက်တိုင်း U နဲ့ I က ကပ်လျက်ရှိနေပေမယ့် မင်းနဲ့ငါကတော့ ဘာလို့ ဒီလောက်ဝေးနေရတာလဲ"
(ပုံကို Google မှ ယူသုံးထားပါတယ်)
ဖုန်းမြည်သံကြောင့် သူမ ထိတ်ခနဲ စိတ်လှုပ်ရှားသွားရသည်။ ဖုန်းခွက်ကို အသာမ,လိုက်ပြီး "ဟဲလို" လို့ အသံပြုလိုက်တော့ တစ်ဖက်က သူမအကြားချင်ဆုံး အသံလေးကို ကြားလိုက်ရသည်။
"မေမေလား၊ မေမေ သမီးပါ။ ဖေဖေနဲ့မေမေ နေကောင်းကြရဲ့လား၊ သမီးလည်း အလုပ်တွေ အရမ်းများနေ တာနဲ့ မေမေတို့ဆီ ဖုန်းမဆက်ဖြစ်တာပါ"
"အေး အေး၊ ရတယ် သမီး၊ မေမေတို့ နေကောင်းကြပါတယ်။ သမီးကော အလုပ်မှာ အဆင်ပြေရဲ့လား"
"သိပ်မပြေဘူး မေမေ၊ သမီး မကြာခင် အလုပ်တစ်ခု ပြောင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ဒီမှာ ရောက်နေတဲ့ သမီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကူညီပေးမယ်တဲ့၊ အခုအလုပ်က သမီးတို့လို မိန်းကလေးတွေကို သိပ်မခန့်ချင် ကြဘူးလေ။ လစာကလည်း နည်း၊ အရမ်းလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ဒီကြားထဲ ဆိုက်ထဲ အလုပ်ဆင်းရတဲ့အခါ မိန်းကလေးဆိုတော့ နှောင့်နှေးတယ်ပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် သမီးလည်း အလုပ်ပြောင်းဖို့ စီစဉ်လိုက်တာ။ နောက် ရမယ့် အလုပ်က လစာလည်း ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ မေမေတို့ကိုလည်း သမီး ငွေများများပို့နိုင်တာပေါ့"
"ဟုတ်လား.....၊ ဒါဆိုလည်း သမီး ပင်ပန်းရင် ပြန်လာခဲ့ပါလား သမီးရယ်၊ သမီး ဒီမှာ အလုပ်လုပ်လည်း မေမေ တို့ စားလောက်ပါတယ်၊ မေမေက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ညည်းအဖေကသာ ညည်းကို လွမ်းလို့ ပြန်လာခိုင်းဖို့ ခဏ ခဏ ပြောနေတာ"
"မေမေ၊ သမီး ပြောမယ်။ သမီးလိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှု မရမချင်း သမီး ပြန်မလာဘူး။ သမီးပြန်လာတဲ့အချိန် ကျရင်လည်း သမီးဟာ အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေရမယ်၊ သမီး မိဘကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထားနိုင်မှ ပြန်လာမယ်။ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် အခြေအနေမျိုးနဲ့တော့ သမီး ပြန်မလာဘူး မေမေ"
"ဒါဆို ဒါပဲနော် မေမေ၊ သမီး ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။ နောက်တစ်ခါကျမှ အကြာကြီး စကားပြောမယ်နော်"
ဖုန်းပြောပြီးသည်နှင့် သူမ ငိုင်တွေနေမိသည်။ သမီးလေးတစ်ယောက်တည်း ရပ်ဝေးမြေခြားမှာ အဆင်မပြေ ဟု ကြားရတော့လည်း သူမ စိတ်မချချင်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သမီးလေးကို ပြန်လာစေပြီး ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာပဲ မိသားစုသုံးယောက် အေးအတူ ပူအမျှ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိစေသည်။ သို့သော်လည်း သမီးက ခေါင်းမာ သည်။ ပြောပြီးသည့် စကားကို ပြန်မပြင်တတ်သည့်အကျင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့် ကိစ္စတစ်ခုကို ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်သည့်အကျင့်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဇာတိပြခဲ့သည်။ သမီး..သမီး...။ သမီးအကြောင်းကို တွေးမိ ရင်းမှ သူမစိတ်အစဉ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလကို ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားလေတော့ သည်။
သူမ အိမ်ထောင်ကျစကတည်းက မိဘအိမ်မှ ခွဲခွာကာ ခင်ပွန်းသည် တာဝန်ကျရာ မြေလတ်မြို့ကလေးသို့ လိုက်ပါခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မိဘအိမ်ရိပ်မှ မခွဲစဖူး ခွဲခဲ့ရသည့်ပြင် အသိမိတ်ဆွေ မရှိသည့် အရပ်ဒေသသစ်မှာ အသားကျဖို့ သူမ အတော်ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ခင်ပွန်းသည် အလုပ်သွားသည့်အချိန်ဆို သူမတစ်ယောက် တည်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့ရသည့်အခါ တစ်ခါတလေ အိမ်လွမ်းစိတ်ဖြင့် သူမ ငိုမိသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်လွမ်းနာ သက်သာစေရန် အိမ်ရှိ ကြမ်းပြင်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောင်လက်နေအောင် သူမ တိုက်ချွတ်တတ်သည်။ တစ်ခါတလေလည်း အိမ်ခြံဝင်းထဲရှိ မြေကွက်လပ်ကလေးမှာ သူမ စိုက်ပျိုးထားသော သီးပင်၊ စားပင်တွေ ကို ရေလောင်းပေါင်းသင် ပြုလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။
ထိုသို့ သမားရိုးကျဆန်လွန်းသော သူမတို့ဘဝလေးထဲသို့ သမီးလေး ဝင်ရောက်လာချိန်မှစပြီး နေ့ရက်တိုင်း မှာ သမီးလေးအတွက်ဟူသော စိတ်ကြောင့် သူမတို့နှစ်ယောက် ခွန်အားဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ပင်ပန်းသော်လည်း သမီးမျက်နှာကို မြင်ရသည့်ခဏ၌ ဘဝအမောများ ပြေပျောက်ခဲ့ရသည်။ သမီးလေးမှာ ငယ်စဉ်က ချူချာ သဖြင့် သူမတို့နှစ်ယောက် ပိုးမွေးသလို မွေးမြူခဲ့ကြရသည်။ သို့နှင့် သမီးလေး ကျောင်းနေရွယ်ရောက်လာ သည့်အခါ အများနှင့်မတူ ဘက်စုံ ထူးချွန်သည့် သမီးလေးကြောင့် သူမတို့ မိဘနှစ်ပါး ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်း အဝိုင်းကြားမှာ သမီးဂုဏ်နှင့် ခေါင်းမော့နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အတန်းစဉ်တိုင်း ပထမရသည့် ပညာရေးတွင် ထူး ချွန်သော သမီးလေးကို သူမတို့ အလိုလိုက် အချစ်ပိုခဲ့ကြရသည်။ သည်လိုနှင့် သမီးလေး အလယ်တန်း အရောက်မှာ ထူးချွန်သည့် သမီးလေးရဲ့ ပညာရေးအတွက် သူမတို့နေထိုင်ရာ မြို့ကလေးမှ သူမ၏ မွေး ရပ်မြေ မြို့ကလေးရှိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပြောင်းရွှေ့ကျောင်းတက်စေဖို့ စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က သမီးနှင့် မခွဲစဖူး ခွဲရသည့်အတွက် သူမရင်မှာ လစ်ဟာလွန်းလှသည်။ သို့သော်လည်း သမီးရှေ့ရေးမို့ သူမကိုယ်သူမ စိတ်တင်းပြီး သမီးနှင့် ခွဲနေခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်တော့ သမီးသည်လည်း မိဘနှင့် ခွဲနေမကျသဖြင့် လွမ်းဖျား ဖျားကာ နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မှ နေသားကျ ကာ ကျောင်းနေပျော်သွားတော့မှ သူမ ဟင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ သည်လိုနှင့် ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေ အလီလီ ပြောင်း ခဲ့ပြီးနောက် သမီးလည်း အထက်တန်းကို ဂုဏ်ထူးများများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သမီးဝါသနာပါရာ သက်မွေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုကို တက်ဖို့လည်း သူမတို့ ခေါင်းညိတ် လိုက်လျောခဲ့ကြသည်။ သူမတို့တာဝန်က သမီးလေး ပညာသင်ရာမှာ မတောင့်မတ မကြောင့်မကြနှင့် စိတ်အေးအေး စာသင်နိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပံ့ပိုးပေးဖို့သာပင်။
ဘွဲ့ရပြီးသည့်နောက် သမီးက သူမတို့ကို အသိပေး တိုင်ပင်လာသည်။ ရေမြေခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ သွားရောက် ပညာသင်ချင်သည်တဲ့။ ထိုအချိန်က သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံး စကားတစ်ခွန်းမျှ ပြောမထွက်နိုင် ခဲ့ကြ။ သမီးကျောင်းတက်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး သူမတို့နှစ်ယောက် ခြိုးခြံချွေတာပြီး ကျောင်းစရိတ်အတွက် စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သမီးအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် ပမာဏ မဖြစ်ခဲ့သော်လည်း သူမတို့နှစ်ယောက် အတွက်တော့ မနည်းလှသည့် ပမာဏပင်။ ယခုလို သမီးအဖေ၏ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းလာခဲ့ချိန်တွင် သမီး အား အဝေးသို့ ထွက်မသွားစေချင်သည်မှာ အမှန်ပင်။ မိဘနှင့် ဥမကွဲသိုက်မပျက် နေထိုင်ရင်း သမီးကို အလုပ်လုပ်စေချင်သည်။ သို့သော်လည်း မိဘဟူသည်မှာ သားသမီး၏စိတ်ငြိုငြင်မှုကို ကြာရှည် မခံစားနိုင် သူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် သမီးဆန္ဒကို လိုက်လျောခဲ့ကြသည်။ သမီးသည် ဘဝရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ စိန်ခေါ် မှုတွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ဖို့ သူမတို့ ရင်မှ ခွဲထွက်သွားခဲ့သည်။ သမီး မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာသည့်နေ့က သူမတို့ရှေ့မှ ရဲရင့်သွက်လက်စွာ ကျောခိုင်းလျှောက်သွားတဲ့ သမီးကို ကြည့်ရင်း သူမ ရင်တွင်းမှ ခပ်တိုးတိုး စကားဆိုမိသည်။ သြော်...ပျံပါစေလေ၊ မိဘရင်က ခွာလို့ ဘဝကောင်းကင်ပြင်ကြီးထဲမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပျံသန်းကြည့် ပါစေတော့။ မိဘရင်ခွင်ထက် လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့နေရာကို သမီး ရှာလို့ တွေ့နိုင်ပါ့မလားရယ်လို့ သူမ ဆက် မတွေးကြည့်ချင်တော့။ တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားတဲ့ သမီးပုံရိပ်က သူမ မြင်ကွင်းမှာ ဝေဝါးသွားခဲ့သည်။
သွားခါစ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတော့ သမီးအသံကို သူမတို့ ရံဖန်ရံခါ ကြားခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ များသော အားဖြင့် သမီးသည် အလုပ်အလွန်များကြောင်း၊ နားချိန်အိပ်ချိန်ထဲမှ ဖဲ့၍ သူမတို့ဆီ ဖုန်းဆက်ရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မကြာခဏ ဖုန်းဆက်ဖို့ အချိန်မရှိတာမို့ ငွေလွှဲပို့လိုက်သည့်အချိန်မှသာ ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စသည့်အကြောင်းအရာများသာ အပ်ကြောင်းထပ်မျှ ပြောဆိုပြီး ဖုန်းချသွားတတ်သည်။ တစ်ခါက ခင်ပွန်း သည်က သမီးအသံကို ကြားချင်လွန်း၍ သမီးပေးထားသော လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခေါ်ကြည့်မိရာ သမီးက စိတ် ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် သူ့အလုပ်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက် မပေးရန်နှင့် ငွေလိုလျှင် ပို့ပေးလိုက်မည်ဟု ပြောဆိုလိုက် သဖြင့် သူမတို့နှစ်ယောက် ရင်နင့်အောင် ခံစားခဲ့ကြရသည်။
သမီးသည် သူမတို့နှစ်ယောက်ကို မလိုအပ်တော့ဟူသော အတွေးက သူမရင်တွင်း၌ ဗလောင်ဆူစေသည်။ ခင်ပွန်းသည်ရှေ့တွင် ဘာမျှမဖြစ်သယောင် ဟန်ဆောင်နေရသော်လည်း ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း မေတ္တာပို့ရင်း သမီးမျက်နှာကို မြင်ယောင်မိသည့်အခါ မျက်ရည်ကျမိသည်။ "မိဘမျက်ရည်တစ်စက် သားသမီးတစ်သက်" ဆိုသည့်စကားကြောင့် သူမ မျက်ရည်ကြောင့် သမီးလေးဘဝ ပူလောင်မှုတွေနဲ့ ညှိုးနွမ်းသွားမှာကိုတော့ သူမ (မိခင်ပီပီ) မဖြစ်စေချင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး သူမစိတ်ကို ဖြေဖျောက်ရင်း၊ ရှိရှိသမျှ အိမ် အလုပ်များ ကို သိမ်းကျုံးလုပ်ကိုင်ရင်း စိတ်အာရုံပြောင်းရသည်။
ယခုတလော သူမကိုယ်သူမ သတိထားမိသည်မှာ ကြာပြီ။ ရုတ်တရက် အသံကျယ်ကျယ် ကြားလိုက်ရလျှင် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုခုကို တွေးမိလိုက်လျှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူမ၏ ဘယ်ဘက်ရင်အုံအောက်မှ စူးစူး ရှရှ အောင့်မျက်မှုက ပို၍ ပို၍ စိပ်လာသည်။ ယခင်က ထိုသို့ ဖြစ်ဖူးသော်လည်း ခံစားရသည့် နာကျင်မှုမှာ ယခုလောက် မပြင်းထန်ချေ။ သူမ ရင်ထဲက နာကျင်မှုကို သူမ သောက်နေကျ ဆေးတွေက လျော့ပါး သက်သာအောင် မစွမ်းနိုင်ပြီလား....။ သူမကို ကုသနေကျ သမားတော်ကြီးက ယခင်တစ်ခေါက် ဆေးခန်း သွားပြစဉ်က အသေအချာ မှာလိုက်သည်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မလုပ်မိအောင် နေပါ၊ တတ်နိုင်လျှင် အိပ်ရာပေါ် တွင်သာ နားနားနေနေပါ။ နှလုံးမှာ အလွန်အားနည်းနေသဖြင့် ခွဲစိတ်ကောင်း ခွဲစိတ်ရနိုင်သည်တဲ့။ မခွဲစိတ် ခင် အတောအတွင်း အားအင်ပြည့်အောင် အနားယူပါဟု အတန်တန် မှာလိုက်သည်။
သူမ အိမ်အလုပ်တွေ တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချလိုက်သည်။ ဟိုစဉ်က ဇိုးခနဲဇတ်ခနဲ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သမျှ ယခုလို လူမမာတစ်ယောက်လို အိပ်ရာထက်တွင် လဲလျောင်းနေရသည်က သူမကို ပို၍ စိတ်ဓာတ်ကျစေလေသည်။ အသုံးမဝင်သူတစ်ယောက်ပမာ ခံစားရစေသည်။ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေရမှ စိတ်က သမီးဆီကို အချိန်ပြည့် ရောက်သည်။ သမီးငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံတွေ၊ သမီးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီကားချပ်တွေ၊ သမီး၏ စာကြည့်စားပွဲ တစ်ခုချင်းစီကို သေချာ ပြန်ကြည့်မိရင်း သမီးကို လွမ်းဆွတ်စိတ်က ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်း မရ ဖြစ်လာသည်။ သမီးနှင့် အဆက်အသွယ် မရခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် သုံးနှစ်ပြည့်တော့မည်။
သမီး...သမီး... သမီးအကြောင်းကို တွေးမိရင်းမှ သူမ သတိရသည်။ သမီးလေးဘဝ ရေလိုအေးပြီး ပန်း လိုမွှေးစေဖို့ သူမ နေ့စဉ်ပြုနေကျ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆွမ်းပန်းရေချမ်း ဆီမီး ကပ်လှူပူဇော်ရဦးမည်။ ထိုအတွေးနှင့် သူမ ခုတင်မှ အသာဆင်းလိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့သို့ ထွက်လိုက်တော့ မိုးစက်မိုးပေါက်များက တဖွဲဖွဲ ကျဆင်းလို့နေသည်။ အိမ်ရှေ့ရှိ သူမ စိုက်ထားသော စံပယ်ရုံကလေးမှာ မိုးရေစက်တွေ ကြား မှာ ဖွေးဖွေးဖြူအောင် ပွင့်နေသည်။ သူမ ခြံထဲသို့ အသာဆင်းကာ စံပယ်ရုံကလေးမှ ဖြူစင်မွှေးပျံ့နေသော စံပယ်ပွင့်ဖြူဖြူကလေးများကို ခူးဆွတ်လိုက်သည်။ မိုးစက်မှုန်ကလေးများက စံပယ်ပွင့်ကလေးများပေါ်တွင် တွဲလွဲခိုလျက် ပိုမိုလန်းဆန်းအောင် အားဖြည့်ပေးနေသလို သူမ စိတ်တွင် ထင်မြင်ကာ ကြည်နူးမိသည်။
ခူးလာသော စံပယ်ပန်းကလေးများကို ပန်းကန်ပြားသန့်သန့်ပေါ်တွင် တင်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပန်းမွေ့ ယာခင်း၍ ကပ်လှူ ပူဇော်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူမ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ ခုတင်ဘေးရှိ အပ်ချုပ်စက် ခုံကလေးမှာ ထိုင်ရင်း လက်စမသတ်ရသေးသည့် ခေါင်းအုံးစွပ်ကလေးကို ချုပ်ဖို့ သတိရသည်။ ယနေ့ နေရ သည်မှာလည်း သက်သောင့်သက်သာရှိသဖြင့် သူမ ခေါင်းအုံးစွပ်ကလေးကို စိတ်လိုလက်ရ ချုပ်နေမိသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့် ထင်သည်။ သူမ ခေါင်းတွေ ရုတ်တရက် မူးဝေလာခဲ့သည်။ မျက်မှန်ကို ချွတ်ပြီး ခေါင်း ကို ဖြည်းညင်းစွာ မော့လိုက်သည်။ ထိုခဏမှာပင် သူမ ခြေဖျားလက်ဖျားများ အေးစက်လာကာ ဘယ်ဘက် ရင်အုံမှ စူးရှစွာ အောင့်မျက် နာကျင်လာသည်။ သူမ ထိုင်နေရာမှ အားယူထပြီး ဘေးက ခုတင်ပေါ်သို့ ရွှေ့ ကာ လှဲလိုက်စဉ်မှာပင် သူမ ရင်ထဲက နာကျင်မှုက မခံမရပ်နိုင်အောင် ပိုဆိုးလာသည်။
နာကျင်မှုသည် သူမ ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ စ၍ တစ်ကိုယ်လုံးသို့ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နေသည်ကို သူမ အသိအာရုံတွင် ခံစား သိရှိနေသည်။ သတိမလွတ်သွားအောင် အားတင်းလျက်မှ သူမ အမြင်အာရုံတွင် သမီးလေး၏ ရုပ်ပုံလွှာက ထင်ဟပ်လာသည်။ သမီး...သမီးလေးကို သူမတစ်သက် တွေ့မြင်ခွင့်မှ ရပါ ဦးတော့မလား။ သမီးလေးအတွက် သူမတို့နှစ်ယောက် အတတ်နိုင်ဆုံး မိဘဝတ္တရား ကျေပွန်နိုင်ခဲ့ပြီ ထင် သည်။ သူမ၏ ဝိုးတဝါး အသိအာရုံမှာ သမီးလေးအတွက် နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကောင်းမှုကုသိုလ် တစ်ခု ကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ရသည့် ကြည်နူးမှုက သူမရင်ထဲ တစိမ့်စိမ့် ဝင်ရောက်လို့လာသည်။ သူမ အားယူပြုံးလိုက်မိသည်။ သမီးရေ... သမီးနဲ့ ဒီတစ်သက် ပြန်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် မေမေ ဖြေသာ ပါပြီ သမီးရယ်....။ မေမေတို့အပေါ်မှာ သမီးလေး ပြောဆိုပြုမူမှုတွေ အမှားအယွင်း ရှိခဲ့ရင်လည်း မေမေ အမြဲ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ သမီးလေးဘဝ တစ်လျှောက်လုံး သာယာအေးချမ်းပါစေကွယ်... .... ....။ ရင်ထဲမှနေ၍ သမီးလေးကို တီးတိုး နှုတ်ဆက် လိုက်ပြီးသည်နှင့် သူမ၏အသိအာရုံဝယ် ပြုခဲ့သမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို တစ်ဖန် ပြန်လည်မြင်ယောင်နေစဉ်မှာပင် နက်ရှိုင်းလှသည့် အမှောင်ထုထဲသို့ တဖြည်းဖြည်း နစ်ဝင် ပျောက် ဆုံးသွားခဲ့ရတော့သည်။
[၃ဝ-၅-၂ဝ၁၂ နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော မိခင်တစ်ဦးကိုယ်စား အမှတ်တရ ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။]
Posted by မြဝတီဇော် at 1:44 AM
Labels: ၀တ္တုတို, ဝတ္တုတို